सावधान ! चर्चित नेपाली नायिकाको नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर ह्याक गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो – Medianp
सावधान ! चर्चित नेपाली नायिकाको नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर ह्याक गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, मङि्सर १७, २०७४०५:१३
काठमाडौं, १७ मंसिर । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा चर्चित कलाकारको नाममा नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर फेसबुक आइडी ह्याक गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको सिकार नेपाली चलचित्रका धेरै कलाकार परेका छन् ।
सुरुमा चर्चित नायिका या मोडलको नाममा फेसबुक आइडी खोलिन्छ । त्यसपछि चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन्छ । म्युचुअल फ्रेन्ड बनेपछि च्याटमा कुराकानी सुरु हुन थाल्छ । त्यसपछि उताबाट आफू मोडल भएको र सहयोगको खाँचो भएको भन्दै सहयोग मागिन्छ ।
त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो मार्केटिङका लागि भन्दै नयाँ साइटमा गएर आफ्नो नाम र पासवर्ड दिन भनिन्छ । उनीहरूले ‘यो पेजमा क्लिक गर्नुस्, यो मेरो फेमली पेज मार्केटिङको लागि हो, फोटो पनि राखिदिनुस् मोडलिङका लागि हो, प्लिज हेल्प मी’ भन्छन् ।
बुझ्दै नबुझी उनीहरूले भनेअनुसार गर्ने धेरैको फेसबुक आइडी ह्याक भएको छ । तर, त्यसबारे धेरै कलाकारले यो तथ्य सार्वजनिक गरेका छैनन् । नम्रता श्रेष्ठ, अदिती बुढाथोकी, आँचल शर्मा, केकी अधिकारी रेखा थापालगायत चर्चित नायिकाको नाममा नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर धेरैलाई यसरी दुःख दिन थालिएको छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक कार्ययोजना
शीतकालमा बेइजिङको वायु प्रदुषणमा उल्लेखनीय कमी
बुढेसकालमा स्कुल जाँदा आपत्तमा परे माग्ने बुढा, यस्तो छ पेट मिचिमिची हाँस्न पाउने रमाइलो भिडियो
भारतका सलमान भन्दा नेपालका कुलमान प्रख्यात भन्दै मुन्द्रेले गरे कुलमानको तारिफ (भिडियो सहित )
ब्वाईफ्रेन्डका लागि अजय देवगनसँगै लिने गर्थिन् यस्ता टिप्स काजोल
म चन्द्रमामा पुगिसकें भन्दै आशिका रुँदै मिडियामा, भन्छिन् मलाई अब धेरै नउडाउनुस
यसरी थाहा भयो संस्कारी बाबूको असली रुप, महिला निर्देशकलाई उनकै घरमा गरे बलात्कार
‘छक्का पञ्जा ३’ सोलो रिलिज, एक साथ दुई सय पर्दामा